देशको स्वाभिमानमा ह्रास आएको छ | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
देशको स्वाभिमानमा ह्रास आएको छ
आज नेपालमाथी चौतर्फी आक्रमण भैरहेको बेला त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हामी कसैको अनावश्यक विरोध गर्न चाहादैनौ तर आज फेसबुक, यूट्युब, गुगल आदिका न्यूज हेर्दा सुन्दा नेपाली युवा युवतीहरु विदेशका सडक कोठीमा राईरहेका छन् । घरेलु काममा गएकी युवती नारीहरुलाई बलात्कार तथा प्रेमको नाममा पेटबोकाई त कतै काम गराई ज्याला नदिई बाधा मजदुर बनाएर राखेका दृष्य नदेख्ने कोही छैन होला । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले पनि देखेको नै छ । पीडितहरुका रोदन चित्कार र सरकारको नाममा छैन केवल रवि लामिछाने पत्रकार सित गुहार मागेका दृष्य हामी
देखिरहेका छौं । सरकारको पहुँच भएर पनि उद्धार कार्य गर्न चाहेको छैन वा नसकेको हो ?
एकातर्फ आज देशको स्वाभिमान लुटिन लुटाउन लागिएको छ भने अर्को तर्फ नेपालका पिडित नागरिकहरु नेपाल सरकार र सरकारका प्रधानमन्त्रि सित गुहार नमागी रवि लामिछाने सित रुदै गुहार मागी रहेका दृष्य प्रकाशित भई रहेका छन् । त्यो दुःख देखि हामीले पनि मन थाम्न सकेका छैनौं । यो देशको अविभावक प्रधानमन्त्री वा सरकारका पदाधिकारी हुन कि पत्रकार रवी लामिछाने हुन ? देशको सरकारले रवी लामिछानेको जत्ति पनि उद्धार गर्न सक्दैन भने के हामी विश्व सामु सुरक्षित छौं । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकी वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको नाममा पठाउदा सिरिया लगायतका मुलुकहरुमा महिलाहरुले पाएको यातना २०७५÷८÷२९ मा मात्रै पनि एक महिला रवि दाई सित खबर पुर्याई दिनु यो भिडियो भाइरल गरी दिन भनेर गुहार माग्दै थिईन् । राजदूत र सरकारको कुरै गरिन, आफ्ना नागरिकको विचल्ली कसरी सहेको छ नेपाल सरकारले जुन घरमा मलाई राखेको छ अथाहा यातना दिएको छ । यो घरलाई हमेशा पुलिसको घेराउमा हुन्छ ४ पटक त नेपाल फर्कन टिकट काटी सके मालिकले रद्ध गराई दियो यदि भिडियो बनाए मारिदिन्छु भनेको छ मलाई एक महिला र पुरुषले विक्रि गरी यहाँसम्म पुर्याएका
हुन । रोजगारीको नाममा मलाई आज थाहा भयो उनका फोन नम्बर पनि दिएकी थिईन्, सिरियाको भन्दा त बरु मुम्बई र दिल्लीका कोठी सुलभ रहेछन् यहाँ त्यस्तो यातना त दिदैनन् । हुन त लोग्ने मानिसलाई पनि सताएकै छ, यदि नेपालीको विचल्ली हेर्ने भए खाडी मुलुकहरुमा जानुपर्ने रहेछ । हुन त नराम्रो मात्र होइन राम्रो पनि छ राम्रो काम र दाम त धेरै मेहनतपछि प्राप्त हुन्छ त्यति जल्दी हुदैन । आज वैदेशिक रोजगारीबाट कठिन काम गर्न सक्नेको लागी आफ्नो घर गृहस्थीको लागि पनि सहयोग पुगेको छ । घर भाडिएका पनि छन् । कसै कसैका घरहरुमा श्रीमतीहरुले सारा सम्पत्ति लगेर अर्कैसँग भागेका समाचारहरु पनि छन् । जे होस् सुख र दुःख दुवै भएपनि सुखलाई कसैले हेर्दैन । दुःखलाई मात्र संसारभरी भाइरल गर्ने प्रचलन छ ।
जताततै देशभरी नै अन्याय अत्याचारमा बृद्धि भएको छ । सामाजिक रितिरिवाज खलबलिएको छ । सरकारकै आठ भरोसामा लोग्ने स्वास्नीबीच तनाव बढेको छ । जातीपातीबी झन तनाव देखिएको छ । परापुर्वकालदेखि चलिआएका लोग्ने स्वास्नीको बारेमा एक रथका दुई पाङ्ग्रा भन्ने गरिन्थ्यो भने आज श्रीमतीले लोग्नेको नाममा मुद्धा हाली पाँच वर्षसम्म जेल सजाय भोगाएका घटनाहरु भाईरल भईराखेका छन् । यो एउटा सच्चा विकृति हो भन्ने कुरा न सरकारले बुझ्यो न नेपालका कानून विदहरुले बुझेयो । यसलाई कसरी कालो कानून भनौ देशभर लागु भएको छ बस आईएनजिओहरुको ईसारामा यस्ता कानूनहरु बनेका हुनसक्छन् भने अडकल सम्म नेपाली जनताले गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारको सिमा छैन, जनतालाई सान्त्वना दिन हो वा किन हो बुझ्न सकिदैन सरकार सुद्ध छु भन्छ । आफ्नो तल्लो निकायलाई पत्राचार गरेको हुन्छ । गैरकानूनी काम नगर्नु भेनेर परिपत्र पत्राचार गरेको हुन्छ । जस्तो कि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पाल्नकै लागि हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने नगर विकास समितिको जग्गामा राति नगर विकास समितिका इन्जिनियर अमिनद्वारा नक्सा बनाई राती राती घर निर्माण गर्न लगाई अन्तमा अनियमित निर्माण गर्न नदिनु भन्दा भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगराएरै भवन बनाउन दिएको छ भने सरकारले नदेखेझै गरी सरकारी पदाधिकारी र स्थानीय निकायका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भवन निर्माण काम सम्पन्न हुन लागेका छन् । यो लुकाएर लुक्न सक्दैन । स्थलगत निरिक्षण गरे हुन्छ ।
← सार्वभौम जनताको परिभाषा
युवाहरुलाई अध्यायन सामग्री हुनसक्छ- भाग २ →